Kurima mbanje mubindu kana greenhouse | MyWeedSeeds.com
Kukura panze ndiyo sarudzo yakanyanya kunaka
Kushanya kwako kunzvimbo yekukura
Dzivisa vanoziva asi kukoka zuva remangwanani
Natural pasi kana mapoto
mbanje yekunze ichikura /
Kukura mbanje mune yako gadheni kana greenhouse
Kana iwe uchifanira kusarudza pakati pekurima mbanje mukati kana kunze, iwe unofanirwa kugara uchisarudza kunze. Chiedza chezuva chairo chinoita kuti mhedzisiro igume yakasimba uye pane matambudziko mashoma kwazvo aunofanirwa kukwikwidzana nawo. Iko hakuna kunetsekana nezve kuyerera kwechiedza mukati kana nguva apo yako yekukura kamuri inofanirwa kugara yakasviba yakasviba, ichiita kuti imba yako isashande. Chiedza chezuva chakanangana chinosvika munzvimbo dzese dzembanje, izvo zvinoita kuti iwedzere kukura kwese kwese. Kana iwe uine sarudzo yekukura mugreenhouse, izvi zvinopa zvakanakisa zvepasirese nyika. Iwe unowana mwenje wezuva wako mbanje zvirimwa zvichabudirira kubva, uyezve iwe unowana dziviriro kubva kumhuka (senge mhembwe, makonzo uye chipmunks) izvo zvinoda zvinomera zvako. Panze pasina dziviriro, zvirimwa zvako zvembanje zvichaiswa pachena kune zvipukanana, mhepo nedutu remvura uye mamwe masimba ausingakwanise kudzora. Uku ndiko chete kubatsirwa uko kukura mumba kunogona kupa izvo zvekunze hazvigone. Nekudaro, iyo yakanakisa kuravira ichauya pamwe chete nemirimo mbanje dzakakomborerwa nezuva.
Kuti udzivise dzimwe dzenjodzi dzekunze dzevanhu vasina greenhouse, edza kuisa fenzi yakagadzikana. Kazhinji paunogona kushanyira saiti yako zvakachengeteka, zvirinani, asi usamboenda kwenguva inopfuura vhiki mbiri pakati pekutarisa pane chirimwa chako. Kana mamiriro ekunze achizoda kudiridzwa kwakawanda, saka uchafanirwa kushanya kunyangwe kazhinji kupfuura izvozvo. Kana iwe usina greenhouse, saka uri kuzoda kudyara mbanje yako zvirimwa muvhu pamusoro pehydroponics, sezvo mvura ingangoita yekungopwa nekukasira kupfuura zvauchazokwanisa kuenderana nayo. Paunofunga pane nzvimbo yaunoda kushandisa, ita shuwa kuti ine mwenje wakakodzera. Iwe uchazoda kuziva kuti kwenguva yakareba sei zvirimwa zvichaburitswa kuzuva rakananga uye uwane nzvimbo inopa mwenje wemangwanani kana zvichibvira. Kana zuva rakwira mangwanani zvirimwa zvako zvinowoneswa, zvinokura zvinomera. Kana iwe uri kurima mbanje mumashure medu, ita shuwa yekuisa yakavanzika chinhu mune yako sarudzo saka nosy vavakidzani varege kukukonzera iwe dambudziko. Kana iwe uchikwanisa kupa yako mbanje zvirimwa maawa azere masere kusvika gumi nemasere ezuva rakatwasuka zuva rega rega ipapo uchave nemikana yakawanda pakukohwa kwakabudirira. Izvi zvinova zvakaoma kure kure kuchamhembe iwe kwaunoenda uko kuwanda kwezuva zvinomera zvako zvaunowana zvichachinja zvichienderana nemwaka, asi iwe uchiri kugona kuronga nzvimbo yakanaka iyo inowedzeredza kuratidzwa kwezvirimwa. Shandisa nzvimbo yako kuti ubatsirwe: mativi ekumaodzanyemba emakomo kazhinji anowana zuva rakawanda uye kumabvazuva nekumadokero kufumurwa kunowanzove nesarudzo dzakanaka dzemangwanani uye dzemasikati.
Vazhinji varimi vanobvumirana, sezvinoita mabhuku mazhinji pamusoro penyaya iyi, iro zuva remangwanani rinosarudzika kana zvasvika pamhedzisiro yekupedzisira yezvirimwa zvembanje, saka edza uye chengeta izvi mupfungwa kana uchisarudza nzvimbo. Kana iwe uchikwanisa kutsvaga kana kugadzira greenhouse, unogona zvakare kuyedza nekuivanza sechimwe chinhu (kureva. Izvi zvinogona kuitwa nezvinhu zvakasiyana (senge opaque mapurasitiki, girazi, PVC kana Fironi) kana nemaitiro akasiyana (sekuripenda kuti riite sesimbi yeshedhi). Kana iwe uchikwanisa kuita kuti chimiro chiratidze kushushikana, sekunge chave chakatenderedza kwenguva yakareba, saka hazvigone kubata chero munhu anotarisisa. Iwe unoda chimiro chinosvika zuva zviri nyore, nepo vanhu vasinga svike. Uchishandisa akajeka magirazi ekupfumisa ayo iwe whitewash inobvumidza zuva rakawanda kusvika kune zvirimwa pane iyo fiberglass kana PVC imwe nzira. Iwe unogona nyore kupa iyo yakacheneswa mhedzisiro necheni yekupenda yepende kana epoxy resin yaunopenda chena kana yakajeka grey. Izvi zvinopa zvirimwa zvako nharaunda yakanaka yekukura pamwe nedziviriro kubva pakuona kwavanoda. Epoxy inobatsira zvinhu kuti zvigare kwenguva yakareba kupfuura pendi, uye kazhinji nguva zvinokupa zvimwe zvingasarudzwa pane kupenda kwaizoita. Ita shuwa kuti haushandise zvinopfuura zvakafanira nekuti izvo hazvizobvumidze zuva rakawanda kuti ribate zvirimwa. Kana usina chokwadi nezvehunhu hwevhu repamusoro panowanikwa greenhouse yako, chera gomba kuitira kuti ugone kurizadza nevhu rakakodzera rebasa iri. Vazhinji vanhu havazive mhando yevhu ravo repaseri pevhu, saka zviri nani kuti usatore mikana.
Iyi misiyano mishoma inogona kupereta musiyano uripo pakati pegoho rinoreba 5 '(1.5 m) kureba uye imwe inoreba 10' (3 m) kureba. Kukura kunze kwehari kuchacheneruka kana tichienzanisa nekushandisa iyo yepasi ivhu nekuti hapana hanya nemidzi inosunga kana pasi rashandiswa. Mbanje mbesa dzinokura kubva muvhu kazhinji dzinokura kureba, asi dzinokurawo zvakapamhama saka ita shuwa kuti waronga rudzi urwu rwekuwedzera. Mushure mezvose, ivo vanonamira kana vango simwa! Imwe sarudzo ndeyekuchera gomba uye nekuisa chirimwa chakaputirwa pasi mukati maro, izvo zvinoderedza kukwirira kwese kwemuti. Izvi zvinoshanda zvakanyanya mushe kana ukaona kuti chirimwa chiri kukura kureba kwecheni yako. Vazhinji varimi senge kugona kufambisa chirimwa kana rumwe rudzi rwechimbichimbi rukaitika, senge mumwe munhu anofanirwa kuuya kuzoongorora chivakwa chako nekuda kwechimwe chikonzero. Kana iwe uine mbanje zvirimwa kunze saka iwe unofanirwa kunyatso tsvaga nzira yekuzvifukidza. Zvinozovabatsira kuti varambe vakahwanda, kunyanya kana iwe uri kuyedza kudzidzisa mbesa dzako kuti dzirambe dziri pasi pefambo.
Kana iwe uri kurima mbanje dzako zvirimwa musango, mvura inofanira kunge yakaenzana zvakakosha sehunhu hwevhu. Iwe unoda sosi ine hutano yemvura padyo kana iwe uchafanirwa kuunza yakawanda mvura kune yako saiti kuti uchengetedze zvirimwa zvako zviiswe mvura. Kana iwe uine nzvimbo yepamusoro saka unogona zvakare kuyedza uye kuendesa zvakare imwe mvura padhuze nepane chirimwa chako kuitira kuti usakwezva chero kutariswa. Imwe sarudzo ingave yekutora marita mashanu (5 L) anogona, kuisa maburi madiki mairi nekuiviga padyo nenzvimbo yako yezvirimwa. Viga hosipaipi inotungamira mugaba kuitira kuti irege kuoneka uye shandisa izvo kuti uchengetedze iyo yakazara kana zvirimwa zvako zvichida mvura. Izvi zvinoenderana zvachose nekuti nzvimbo dzako dzepedyo dziri padyo sei neimba yako, zvakadaro.